Sidee lagu soo afjaray mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweynaha? - BBC News Somali
Maxay isku seegeen madaxweynaha iyo guddoomiye Mursal?
Maxaa ka soo baxay kulankii gudoomiye Mursal iyo labaadiisa ku xigeen?
''Waxyaabaha lagu heshiiyay''
''Waxaa muuqata in hoos loo wada hadlay oo uu dhacay wada-xaajood siyaasadeed oo ay kamid ahaan karto in xurmadii uu lahaa guddomiyaha la soo celin doono dhanka kasta, marka la fiiriyo xaaladda uu dalka ku jira na wax kasta oo lagu heshiiyay ba waxaad moodaa inay muhiim tahay in indhaha laga qabsado''.Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Barfasoor Ibraahim Bursalid.
Go'aan ka gaarista iyo qabashada mooshinka ayaa dhalisay buuq badan, iyadoo na ay ku kala qeybsameen guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen.